Uvimba weWerner Baumann - Ilungelo laseMelika lokwazi
I-imeyile yangaphakathi yaseBayer ithi ifuna ukuBuyiselwa kweNtembeko yoLuntu phakathi kweMonsanto Mess
ezaposwa ngomhla Juni 13, 2019 by UCarey Gillam
Ngoxinzelelo lwezomthetho nolwabanini zabelo, iBayer AG ngoLwesine yayilungiselela ukumilisela inyathelo "lokufumana ukuthembakala koluntu" emva kokufunyanwa kwayo kunyaka ophelileyo weMonsanto Co izise iBayer amawaka amatyala afakwe ngamaxhoba omhlaza kunye nokutyhilwa kokukhohlisa kwenkampani inkxalabo yezempilo malunga ne-Mossanto's glyphosate-based Roundup herbicides.
Icebo lifuna ukufuna enye indlela yokufumana iglyphosate, iyeza eliyichiza lokutshabalalisa ukhula elasungulwa yiMonsanto ngo-1974. IMonsanto yatyhalela le khemikhali ekusetyenzisweni okuxhaphakileyo kangangokuba i-glyphosate ithathwa njengeyona isetyenziswa kakhulu kwi-herbicide embalini kwaye iintsalela zombulali wokhula zifumaneka ngoku ukutya, amanzi, nomchamo womntu. Ngaphandle kweMonsanto yokulahla impilo yabantu kunye nefuthe lokusingqongileyo, izifundo zesayensi zibophelele kwimveliso ye-herbicide esekwe kwi-glyphosate eseMonsanto Uluhlu lwezifo kunye nokugula Kwaye ndibhale phantsi iingxaki zokumelana nokhula, ukwehla kwezingcolisi, ukwehla komhlaba kunye nemiba yongcoliseko lwamanzi, phakathi kwezinye izinto ezixhalabisayo.
Ngokwe-imeyile kaJuni 13 ebhalwe ngu-CEO we-Bayer u-Werner Baumann, i-Bayer iceba ukupapasha isibhengezo ngolwe-Sihlanu esichaza "iseti yokuqala yokuzibophelela" ngokubhekisele kwi-glyphosate, ezolimo kunye nozinzo lwehlabathi. I-imeyile yafunyanwa kwaye yabhengezwa ngabahlobo boMhlaba- Canada kwaye ayinakuqinisekiswa kwangoko yi-US Right to Know.
“IGlyphosate izakuqhubeka nokudlala indima ebalulekileyo kwezolimo nakwipotfoliyo yethu. Kodwa indalo ikude kubungakanani-obulingeneyo konke. Ngempumelelo yehlabathi jikelele ye-glyphosate yeza kusetyenziswa ngokubanzi, ukuxhathisa ukhula, kwaye kwezinye iimeko kusetyenziswe gwenxa ngokungalindelekanga. Amafama afanele ukhetho olungakumbi. Kungenxa yoko le nto siza kutyala imali malunga neebhiliyoni ezintlanu zeerandi ngeendlela ezongezelelweyo zokulwa nokhula kule minyaka ilishumi izayo. Sizimisele ukuxhobisa abalimi behlabathi ngezona zinto zibalaseleyo kubuchwephesha kwezolimo kunye noqeqesho olujolise ekuhlaleni ngendlela yokuyisebenzisa, ”itsho i-imeyile
I-imeyile ithi iBayer izakusebenzela "ukuphakamisa iinzame zethu ekuhleni ..." kunye nozinzo kunye nokudibana nabanini zabelo.
"Njengenkokheli entsha kwezolimo, sijolise ekumiseni imigangatho engahambelani kuphela nemikhwa yamashishini ethu, kodwa isityhalele sonke ukuba sibe ngcono," itshilo i-imeyile.
Izabelo zeBayer ziye zalahla iipesenti ezingama-44 okoko yafumana iMonsanto kunyaka ophelileyo, kungekudala ngaphambi kokuba ilahleko ezintathu zokuqala zelahleko kumaxhoba omhlaza abanga ukubhencwa kwi-Roundup kaMonsanto ibangele ukuba baphuhlise i-non-Hodgkin lymphoma. Ngaphezulu kwe-13,000 yabantu abamangalela amabango afanayo kwaye ukuza kuthi ga ngoku amajaji ajonge ngaphezulu kwe- $ 2 yezigidigidi kumonakalo, kubandakanya nomonakalo owohlwayayo njengesohlwayo sezinto abameli babamangali ababonakalise njengeendlela ezinobungozi ezijolise ekunciphiseni ubungqina benzululwazi bokuba i-Monsanto's herbicides inokubangela umhlaza.
U-Beatrice Olivastri, u-CEO, Abahlobo boMhlaba wase-Canada, uthe uyathandabuza malunga nokunyaniseka komzamo. "Iphulo lomtsalane yinkcitho yemali yabanini zabelo," utshilo. Oku kubonakala ngathi zizindlela ezifanayo ezifanayo. ”
U-Bayer's Raymond Kerins, usekela-mongameli omkhulu kwezonxibelelwano nakurhulumente, khange aphendule kwisicelo sokubeka izimvo malunga ne-imeyile, kodwa sele etshilo ngaphambili ukuba injongo yenkampani bubuchwephesha, ekuhleni kunye nokuzibandakanya okunyanisekileyo okujikeleze imiba yeMonsanto.
Jonga ikhonkco kwi-imeyile yeBayer Apha.
Ukutya kwengqondo, Pesticides Bayer, umhlaza, EPA, ukutya, glyphosate, ulwaphulo, IMonsanto, URaymond Kerins, Yisonge yonke, inzululwazi, UWerner Baumann
IMonsanto, umzabalazo weBayer wokuqhubeka nokuKhula kokuLungisa umhlaza
Ingxubakaxaka ngaphakathi nangaphandle kwamagumbi eenkundla kubonakala ngathi iyakhula iMonsanto, iyunithi yomnini waseJamani uBayer AG, njengoko inkampani isebenza ukuhlangabezana nexesha elibekiweyo lezenzo zesibheno kwizilingo ezintathu zomhlaza we-Roundup iMonsanto ilahlekile ukuza kuthi ga ngoku ngaxeshanye nenkampani kufuneka ndizilungiselele iimvavanyo ezintsha ekupheleni kweli hlobo.
Ubunzima bomthwalo wokumangalelwa babekwa ligqwetha laseMonsanto / Bayer kwinkundla yezibheno yaseCalifornia esandula ukufuna ixesha elingakumbi lokufaka Isibheno sikaMonsanto Kwimeko yokuqala ilahlekile kwihlobo ephelileyo.
Ummangali kwelo tyala, UDewayne "Lee" Johnson, wanikwa i-289 yezigidi zeedola yi-San Francisco jury eyafumanisa ukuba i-non-Hodgkin lymphoma kaJohnson ibangelwe kukuvezwa kwakhe yimithi ye-glyphosate esekwe kwi-glyphosate. Njengengxenye yezigidi ezingama-289 zeedola, ijaji yayalela i-250 yezigidi zeedrama kumonakalo owohlwayo emva kokuba amagqwetha kaJohnson enike ubungqina bokuba iMonsanto ibucinezele ubungqina bengozi yemichiza yokubulala ukhula.
Ijaji yetyala yehlise ibhaso lomonakalo kwi-78 yezigidi zeedola, kwaye uJohnson kunjalo ukubhenela ngaphaya Buyisela isigwebo esipheleleyo.
Isibheno sikaMonsanto siphikisa, phakathi kwezinye izinto, ukuba ukuba inkundla iyala ukusijika isigwebo akufuneki kubekho mbuyekezo yomonakalo wohlwayo konke konke, nokuba uJohnson unikwe isixa esincinci somonakalo wembuyekezo.
Kwifayile yamva nje, igqwetha likaBryan Cave uK. Lee Marshall uxelele inkundla Ufuna ukongezwa kwexesha ukulungiselela isishwankathelo esilandelayo esifanelekileyo kwisibheno sikaJohnson ngenxa yeendlela ezahlukeneyo ezibekiweyo kumatyala amaninzi iMonsanto iyazikhusela. Ucacisile ixesha elisikiweyo lokuhamba kwesindululo IPilliod v. IMonsanto, apho ijaji yayalela ukuba iMonsanto ihlawule ngaphezulu kwe- $ 2 yezigidigidi kumonakalo, kunye nexesha elibekiweyo UHardeman v. Monsanto, apho ijaji yayalela ukuba inkampani ihlawule malunga nezigidi ezingama-80 zeedola kumonakalo. IMonsanto ifuna ukubhukuqa zombini ezo zigwebo ngokunjalo.
Kwiveki ephelileyo, iMonsanto bafaka isaziso Kwinkundla yomdibaniso yokuba-kunye nomshuwalense weLiberty Mutual Insurance Co - babethumele i-100 yezigidigidi zeedola njengoko iceba ukubhena isigwebo sikaHardeman. Inkampani ine Julayi 2 ukuva kwisicelo sayo sokuba ijaji yetyala ibeke ecaleni isigwebo kwaye iyalele ityala elitsha.
“Ngenxa yesiphelo sendlela yokuxoxwa kwesindululo esisemva kwexesha likaHardeman noPilliod, ndihleli, kwaye ndiza kuba, ndichitha ixesha elininzi kwezi veki zimbalwa zizayo kwiziphakamiso zasemva kwetyala ezicela umngeni kwizigwebo ezinkulu kula matyala. Ezi zibophelelo zichaphazela ixesha zinokuphazamisa ukubanakho kwam ukuchitha ixesha ukulungiselela… kwesi sibheno, ”utshilo uMarshall enkundleni.
Kananjalo wabhala wathi, ityala likaJohnson "lintsokothe ​​ngokungaqhelekanga kwaye linika imiba emininzi enzima." Umcebisi wangaphakathi e-Bayer ufuna ukuphonononga, aphawule kwaye ahlele impendulo emfutshane ngaphambi kokuba afayilishwe, wongeze watsho.
Isibheno sikaJohnson siphathwa ngendlela ekhawulezileyo ngenxa yokwehla kukaJohnson kwezempilo kunye nokuxilongwa komhlaza kwisifo. Amagqwetha kaJohnson athe balindele ukuba iingxoxo zomlomo zibekwe kwizibheno ngoSeptemba okanye ngo-Okthobha, ngesigqibo sokugqibela esilindelweyo kwiintsuku ezingama-90 emva kwengxoxo yomlomo, ngokunokwenzeka ngumbulelo.
Ukuba iMonsanto iphulukene nesicelo sayo kwityala elitsha kwityala likaHardeman inkampani kulindeleke ukuba ifake isibheno kwiNkundla yeSibheno yeThoba yezibheno kwinkqubo enokuthi itsalwe kwintwasahlobo elandelayo, amagqwetha abandakanyekayo kwityala litshilo.
Ngelo xesha, i ityala elilandelayo kulindeleke ukuba iqhubeke ngo-Agasti 19 eSt. USharlean Gordon, ngumfazi obanjwe ngumhlaza kwiminyaka yakhe yama-50. Ityala lafakwa ngoJulayi ka-2017 egameni labamangali abangaphezulu kwama-75 kwaye uGordon ngowokuqala kwelo qela ukuya kuthethwa enkundleni.
Ngaphezulu kwe-13,000 yabamangali baye bafaka isimangalo ngokuchasene neMonsanto e-United States besithi batyhola i-non-Hodgkin lymphoma ngenxa yokuvezwa kwababulali bokhula base-Monsanto glyphosate, njenge Roundup.
Njengokuqhubeka kwesimangalo, abatyali mali beBayer bakhula bengazinzanga kwaye uninzi lunyanzela iBayer ukuba ithathele ingqalelo nzulu indawo yokuhlala jikelele, itsho imithombo. Abahlalutyi abohlukeneyo babeka inani lokuhlawula elinokubakho phakathi kwe- $ 2 yezigidigidi ukuya kwi-3 yezigidigidi kwicala eliphantsi, ukuya kuthi ga kwi-10 yezigidigidi zeedola okanye kancinane ngaphezulu njengokuphela koluhlu.
Izabelo zikaBayer ziwile ngeepesenti ezingama-44 okoko isigwebo sikaJohnson sanikezelwa ngo-Agasti ophelileyo.
I-Bayer yangaphakathi imeyile yomhla kaJuni 13 kutyhilwe ukuba inkampani isungula iinzame ezintsha zokuthengisa ezijolise ekuhlukaneni nokuziphatha okungathandabuzekiyo kukaMonsanto.
I-imeyile ethunyelwe ivela kwi-CEO yeBayer uWerner Baumann yathi: “Kungoku sijamelene nemibuzo yentembelo yoluntu. Lo mngeni ukwalithuba lethu lokuba sibonise ukuba simeleni. Kungenxa yoko le nto sikhona
ukuphakamisa ibha njengoko siqala uhambo lokuphakamisa iinzame zethu ekuhleni,
uzinzo kunye nendlela esidibana ngayo nabachaphazelekayo. Njengenkokeli entsha kwezolimo, thina
Sijonge ukuseta imigangatho engahambelani kuphela nemilinganiselo yamashishini ethu, kodwa isityhalele sonke ukuba sibe njalo
Ukungafihlisi sisiseko sethu. Siza kuguqula imigaqo-nkqubo yethu yokubandakanya eyibeka yonke into yethu
Unxibelelwano nososayensi, intatheli, abalawuli kunye nomgaqo wezopolitiko ekuhleni,
isidima nembeko, ”i-imeyile yangaphakathi yeBayer ithi.
I-Monsanto Roundup Trial Tracker Bayer, Umqolomba kaBryan, umhlaza, inkundla, EPA, ukutya, glyphosate, K. Lee Marshall, ulwaphulo, IMonsanto, Yisonge yonke, UWerner Baumann
I-Bayer yenza ibhidi ye "Trust" phakathi kwesithathu sovavanyo lwe-Monsanto Cancer
ezaposwa ngomhla Aprili 8, 2019 by UCarey Gillam
I-Bayer AG, eyathenga iMonsanto ehlotyeni elidlulileyo, utshilo uMvulo ukuba yayisenza ukuba izifundo zesayensi zifumaneke kuphononongo lukawonkewonke kumzamo wokulwa neenkxalabo ezikhulayo malunga nokhuseleko lweemveliso zeMosanto ezisisiseko se-glyphosate.
"Ukungafihli nto kukukhuthaza ukuthembana, ke ngoko ukwenza izinto elubala kuyinto entle kubathengi, abaqulunqi bomgaqo-nkqubo kunye namashishini, utshilo uLiam Condon, umongameli weBayer kwicandelo lezenzululwazi ngezityalo. Kwingxelo. Ukhuseleko, utshilo, yeyona nto iphambili kwinkampani.
Amagqabantshintshi eza njengoko uxinzelelo lonyuka kulawulo lweBayer njengoko abantu abamalunga ne-11,000 bemangalela iMonsanto betyhola i-glyphosate-based herbicides efana ne-Roundup ebangela ukuba ingeyo-Hodgkin lymphoma, kwaye iMonsanto ifihle umngcipheko kwaye yaxhaphaza irekhodi lesayensi. Uvavanyo lokuqala lomhlaza we-Roundup lwakhokelela kwisigwebo se-jury se- $ 289 yezigidi kumonakalo ngokuchasene neMonsanto, nangona ijaji kamva yehlisela kwi- $ 78 yezigidi. Ityala lesibini elinjalo liphelile kwinyanga ephelileyo ngesigwebo sejaji se- $ 80.2 yezigidi ngokuchasene neMonsanto. Ityala lesithathu liyaqhubeka ngoku.
Kwiveki ephelileyo iJaji yeSithili sase-US uVince Chhabria uxelele abameli be-Bayer kunye negqwetha labamangali ukuba angathanda ukuba amaqela angene kulamlo ukuze axoxe malunga nento enokwenzeka. ukuhlalisa. Uphumile kwityala lesine eliza kuqala ngoMeyi.
IMonsanto kunye neBayer bayaziphika izityholo kwaye bathi ubunzima besayensi buxhasa ukhuseleko lwe-glyphosate herbicides. Bayalikhanyela ibango lokuba oososayensi benkampani yesiporho-babhala ngathi babhala amaphepha enzululwazi abonakala ngathi azimele kwaye basebenzise irekhodi yesayensi.
“Ngokwenza iinkcukacha ezikhuselekileyo zenzululwazi zifumaneke, sikhuthaza nabani na onomdla wokuzibonela indlela esisebenza ngayo kukhuseleko. Samkela ithuba lokuthetha-thethana ukuze sakhe intembeko kwisayensi eyiyo, ”utshilo uCondon.
Inkampani ithi ibonelela ngokufikelela kwiingxelo ezili-107 zeBayer eziphantsi kolawulo lweglyphosate ezithunyelwe kwiGunya loKhuseleko loKutya laseYurophu njengenxalenye yenkqubo yokugunyazisa iziyobisi kwi-European Union. Izifundo ziyafikeleleka kwiBayer elubala.
Iindaba ezivela eBayer ziza phambi kwentlanganiso yabanini zabelo ngo-Epreli 26 apho abanye abatyali zimali bafuna intloko ye-Bayer CEO uWerner Baumann ngokukhokela inkampani ekufumaneni iMonsanto. Abaphathi abaphezulu beMonsanto bahamba nezigidi zeedola kwiipakethe zokuphuma ngaphambi nje kovavanyo lokuqala lomhlaza we-Roundup, eshiya iBayer ibambe ibhegi yelahleko yesimangalo kunye noluntu olubi. Ukusukela ngehlobo ephelileyo, inkampani ibone ukufuduka kwabathengi njengabathengisi, iidolophu, izithili zezikolo kunye nabanye bathi bayabuya umva kwiMonsanto herbicides.
Njengoko iBayer igxile kwimiyalezo yayo ngaphandle kwegumbi lenkundla, ugqirha wezifo Ubeate Ritz, Unjingalwazi kwiYunivesithi yaseCalifornia eLos Angeles School of Public Health, kufanelekile ukuba eme namhlanje ePilliod v. Monsanto, ulingo lwesithathu lomhlaza weRoundup. URitz ungqinile kwizilingo ezimbini zangaphambili ukuba uhlalutyo lwezifundo ezininzi zesayensi lubonisa ukuba kukho "Unxibelelwano oluthembekileyo" phakathi kwe-glyphosate-based herbicides efana neMonsanto's Roundup kunye ne-non-Hodgkin's lymphoma.
Ityala elikhoyo ngoku laziswa ngu-Alva no-Alberta Pilliod, isibini esitshatileyo bobabini abangenayo i-Hodgkin lymphoma abathi ibangelwa yiminyaka yokusetyenziswa kwe-Roundup.
Ukulandela uRitz kuya kuba bubungqina obuvela kuDennis Weisenburger, ugqirha wezifo ogxile ekufundeni oonobangela be-non-Hodgkin lymphoma. Weisenburger wangqina kwityala lika-Edwin Hardeman v. Monsanto ukuba i-Roundup “sisizathu esibalulekileyo” somhlaza kubantu ababhengeziweyo.
Okwangoku, amagqwetha abamangali aqhubeka nokukhathazeka malunga nento abakholelwa ukuba “yi-geofencing” NguMonsanto. I-geofencing yinkqubo eyaziwayo yentengiso ehambisa imiyalezo / umxholo othile kuye nakubani na ngaphakathi kwendawo ethile echongwe yinkampani okanye iqela elihlawulela intengiso. Indawo inokuba ncinci kakhulu, imayile engqonge idilesi ethile, umzekelo. Nabani na okwindawo ekhethiweyo usebenzisa i-app kwifowuni efanelekileyo-enje ngemozulu yesimo sezulu okanye umdlalo-uya kuthi asiwe kwintengiso. Abantu ekujoliswe kubo akufuneki bakhangele ulwazi; ibonakala nje kwifowuni yabo efanelekileyo.
Amagqwetha abamangali bawuphakamisa umba kwityala likaHardeman, kwaye babenexhala lokuba uMonsanto wayeqhubela umyalezo kwijurors ngokwenza ityala kwisilingo sokuqala somhlaza se-Roundup, esaziswa ngumgcini wezizathu uDewayne “Lee” Johnson.
Kwityala likaPilliod, umba kwaxoxwa ngawo ngoLwesine kwinkundla njengoko amagqwetha abamangali efuna isigwebo sokuthintela uMonsanto kwiqhinga, kodwa ijaji yayithandabuza kwaye yenqabile ukukhupha loo myalelo.
Nantsi inxenye yotshintshiselwano. Zonke ziyabonakala kwifayile ye- ingxelo ebhaliweyo.
IGQWETHA LE-PLAINTIFFS 'UMLUMKISI OYINKCUKACHA: Mhlekazi, ndicinga ukuba ikho enye- kwaye ndiyayifumana ingongoma yakho. Ndicinga nje ukucacisa into enye yenkqubo eyinyani. Kunene? Ukuba ndingahamba ngegqwetha ndize ndithi kuwe, “Heyi, Juror Number 3, izinto zikaMonsanto zibangela umhlaza kwaye zonke ezi zifundo ziyayibonisa,” ndiyathetha, iyakuba yinto ephosakeleyo leyo. Ngokukhawuleza. Olo tyala luyaphazamisa. Kunene? Ngoku ukuba benza kwaloo nto inye- ukuba ndenze kwa into enye ngokujolisa umnxeba womntu wonke kule nkundla yamatyala okanye umnxeba womntu ngamnye kule nkundla kwaye ndityhala olo lwazi, kwa loo myalezo kubo kwifowuni yabo- kwaye kwenzeka ntoni-mna Andazi ukuba usebenzisa ifowuni yakho ukulungiselela olu hlobo, kodwa, umzekelo, xa ndijonga i-app yam ye-ESPN kwaye ndijonge amanqaku eqela le-UCLA lamanzi, okanye nantoni na, uyazi, kuncinci iintengiso ezivelayo.
MR. ISILUMKISO: Kwaye ezo ntengiso zithi "Ijaji yaseburhulumenteni ithi i-Roundup ikhuselekile." Luhlobo lwezinto
siyabona. Sikubonile oku kusenzeka ngamandla kwityala likaJohnson. Amajaji amaninzi ngexesha lohambo olunqabileyo akhankanye ukuba ezi zinto zityhalelwa kubo kamsinya nje bakuba behamba kwisakhiwo. Kwaye nokuba iMonsanto iyayenza okanye ayiyenzi loo nto, ndicinga ukuba ukuba kunjalo, kufanelekile
akuvumelekanga. Ayisiyonto yokwenene yoLungiso lokuQala. Oko ngoku kujolise ngqo ebantwini
Bayazi ukuba abanakuthetha.
INKUNDLA: Kwaye undicela ukuba ndinike into endiyaziyo ukuba ikho kwaye ikhona
nangokuthintela kwangaphambili. Ndithetha ukuthi, ubugcisa busithathile indawo mhlawumbi asizange sicinge ukuba buza kuhamba… Ndiyaqikelela ukuba bendikhetha amacala, ndingayikholelwa loo nto. Kodwa andikwazi ukukhetha amacala.
I-Monsanto Roundup Trial Tracker Alva kunye neAlberta Pilliod, Bayer AG, Ubetha uRitz, UDennis Weisenburger, UDewayne "Lee" uJohnson, UEdwin Hardeman, geofencing, glyphosate, UMgwebi Chhabria, ILiam Condon, IMonsanto, i-non-Hodgkin lymphoma, Yisonge yonke, UWerner Baumann
Ityala le-SF Roundup libonisa ukubaluleka kokuzimela kubungqina besayensi
ezaposwa ngomhla Agasti 30, 2018 by USusan Lang
Eli nqaku lalipapashwe ekuqaleni kwifayile ye- ISan Francisco Chronicle.
NguNathan Donley kunye noCarey Gillam
Sele kudlule iiveki ezintathu ijaji yaseSan Francisco fu maneka Ukubhencwa kwimichiza yokubulala ukhula iMonsanto's Roundup herbicides kube negalelo kulowo wayesakuba ngumgcini wesikolo owayengumgcini wesikolo uDewayne "Lee" Johnson kwaye wanikezela ngezigidi ezingama-289 zezigidi kumonakalo kutata oneminyaka engama-46. Kwaye ngeli xesha, siye sabona amabango aphindaphindiweyo kwi-pesticide giant kunye namaqabane ayo, eqinisweni, ijaji yayingalunganga kwaye umbulali wokhula okhethiweyo kwizigidi zabantu baseMelika ukhuselekile ngokugqibeleleyo.
Usekela-Mongameli weMonsanto uScott Partridge kuphinda imantra eqhelekileyo: Amakhulu ezifundo zesayensi, kunye nokuphononongwa ziiarhente zolawulo kwihlabathi liphela, kubandakanya ne-Arhente yokuKhuselwa kokusiNgqongileyo e-US, bafumanise ukuba i-glyphosate - eyona nto isebenzayo kwiRoundup- ayibangeli mhlaza. Umnini omtsha weMonsanto, uBayer AG, waya phambili. Umphathi we-Bayer u-Werner Baumann uxelele abatyali-mali ukuba i-jury yayicace gca ukuba "ayilunganga" kwaye i-Bayer iyakusebenza ukuqinisekisa ukuba ukuthengiswa kweemveliso ezibulala ukhula akuphazanyiswa. "Ngaphezulu kwe-800 yezifundo zesayensi kunye nokuphononongwa" kuxhasa ukhuseleko lwe-glyphosate, uxelele abatyali mali.
Ngaphandle kokuphikiswa, amanqaku athethwe ngononophelo avakala enomdla kwaye egqibile- kanye njengoko bekulindelwe.
Kodwa emva kokuwongwa kwejaji, abantu abaninzi e-United States abathe bafeza iyeza lokubulala izitshabalalisi engceni nasezigadini iminyaka bewathandabuza la mazwi aqinisekisayo. Kwaye ngesizathu esihle.
Ukuqinisekiswa kwezokhuseleko kwezokhuseleko kushiya igama elinye elibalulekileyo- igama elibaluleke kakhulu kuye nakubani na ofuna ukwenza isigqibo esichazelweyo malunga nomngcipheko womhlaza onxulunyaniswa neRoundup kunye namakhulu ezinye izinto zokubulala ukhula ezisisiseko ezisemalikeni.
Elo gama “lizimele” njengakwi “zifundo ezizimeleyo zesayensi kunye nokuphononongwa.”
Njengoko kubekiwe kwilingo, kukho ubungqina obuninzi, obuninzi babo buvela kumaxwebhu angaphakathi kaMonsanto, echaza ukuba uninzi lophando olucebisa ukuba iRoundup ikhuselekile iye yalungiswa kunye / okanye yachaphazeleka yiMonsanto kunye neekhemikhali zayo .
Kodwa uphando oluzimeleyo ngokwenene lubonakalisile ukuba sikhona isizathu sokukhathazeka. Njengokusetyenziswa kweRoundup kwiifama zase-US, ingca yokuhlala kunye negadi inayo yanda ukusuka kwi-40 yezigidi zeepawundi ngonyaka kwi-1990s ukuya phantse kwi-300 yezigidi zeepawundi kule minyaka idlulileyo, ubungozi bekhemikhali buye babhalwa kwizifundo ezininzi eziphononongwe ngoontanga.
Yayiyimisebenzi ezizimeleyo kunye nokuphononongwa ngoontanga eyakholisa ingalo yophando ngomhlaza World Health Organization Ukufumanisa ukuba i-glyphosate yinto enokubangela i-carcinogen yabantu. Ekuvukeni kokufunyanwa kwe-WHO, ICalifornia yongeze i-glyphosate kuluhlu lukarhulumente lweekhemikhali ezibangela umhlaza.
Impendulo kaMonsanto kulwahlulo luka-2015 yayisetyenziswa ngakumbi kwisayensi. An "Uphononongo oluzimeleyo" Ye-glyphosate ibonakalisiwe kwiphephancwadi lezenzululwazi eliqwalaselwe ngoontanga elichaza ulwahlulo lwe-IARC. Ukuphononongwa kungekuphela nje kwakubizwa ngokuba kukuzimela, kodwa wachaza ukuba akukho mqeshwa waseMonsanto oye wabandakanyeka ekubhalweni kwayo. Nangona kunjalo ii-imeyile zangaphakathi zenkampani, zajika zaza zafunyanwa ekumangalelweni, zatyhila ukuba isazinzulu saseMonsanto ngenene sinoburhalarhume ohleliweyo kwaye iphonononge uhlalutyo ngaphambi kokupapashwa kwayo.
Lowo yayingomnye wemizekelo emininzi echaziweyo kumaxwebhu angatywinwanga emizamo efanayo, ekubhekiswa kuyo ngabasebenzi bakaMonsanto njengo “Isiporho. "
I-EPA ikwicala leMonsanto malunga nososayensi abazimeleyo, ukubhengeza ukuba isibulali zinambuzane akunakubangela umhlaza. Ngokwenza njalo, iarhente ayihoyanga into yokuba iOfisi yoPhando noPhuhliso ivakalise vula ngokusingathwa kwe-EPA yovavanyo lwe-glyphosate, njengoko kwenzile Iphaneli yengcebiso yesayensi Ibizwe yiarhente ukuphonononga uvavanyo.
Mhlawumbi ayothusi into yokuba ubungqina belityala babandakanyiwe yonxibelelwano Ukuchaza into enokuthi ichazwe njengokusebenzisana okumnandi phakathi kweMonsanto kunye namagosa athile e-EPA.
Abantu baseMelika bafanelwe ngcono ngabalawuli babo, ekufuneka babeke phambili ekubekeni impilo yoluntu kude kunenzuzo yequmrhu.
Endaweni yoko, kwathatha indoda ekhaliphileyo ebulawa ngumhlaza kunye nejaji yabemi aba-12 abaqhelekileyo ukuba benyuke bajongane nomceli mngeni wokujonga nzulu iinyani zesayensi kunye nokubiza ubulungisa.
Pesticides, Akohlulwanga Bayer AG, Environmental Protection Agency, EPA, Isiporho, glyphosate, IMonsanto, Yisonge yonke, UScott Partridge, UWerner Baumann